Sidee ayuu qofka lacagta aan udiray u heli karaa lacagtooda? : TalkRemit Customer Portal
Sidee ayuu qofka lacagta aan udiray u heli karaa lacagtooda? Print
Modified on: Fri, 21 Aug, 2020 at 3:51 AM
Waxaan bixinaa tiro adeegyo ah, iyadoo kuxiran waddanka aad u direyso:
1. Koontada bangiga
Waxaan ku shubeynaa lacagta aad dirtid faahfaahinta akoonka bangiga aad bixisid markaad abuuraysid lacagta. Fadlan la soco in ay qaadan karto dhowr maalmood in lacag bixinta lagu sifeeyo koontada aad udirtay, iyadoo ay kuxirantahay bangigaaga dalka aad udirtay.
2. Lacag kaash ah
Markaad abuureyso lacagta aad direyso waa inaad doorataa halka uu qofka lacagta aad udireyso uu kaqaadan doono. Marka lacagta dirideedu aad kuguuleysato oo eey xagaaga kasoo baxdo, waxaad heli doontaa emayl iyo SMS oo leh tixraaca lacagta kaashka ah. Qaatahaagu wuxuu aadi karaa laanta wuxuuna qaadan karaa lacagta iyagoo watta aqoonsigooda iyo tixraaca aad la wadaagtid iyaga. Shuruuda Aqoonsigu waxay ku kala duwan yihiin shuraakada bixinta lacagha, fadlan hubi gudaha.
3. Lacagaha Mobilada
lacagta waxaa si toos ah loogu diraa koontada lacagta mobilka ee lambarka taleefoonka ee aad bixisay markaad macluumadka qofka aad udireyso lacagta aad buuxbuuxineysid. Qofka aad udirtay lacagta wuxuu ka heli doonaa ogeysiis bixiyaha lacagta ku bixiya mobilada marka lacagta la xisaabiyo.